ဟက်ပီး Eid al-Adha!
နေ့ထူးနေ့မြတ် အီးဒ်ပွဲတော်အခါသမယမှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်းကြပါစေ: မိတ်ဆွေတော်တို့မိသားစုနှင့်တကွ ခင်မင်ရာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများလည်း ကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေ. ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုတာက လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလဲ အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီး အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိကြပါစေ. လိုအင်ဆန္ဒတွေလဲတလုံးတ၀ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်. Eid Mubarak!